Search results for "विवाह प्रबन्‍ध गर्नु"
घो पोगीन [ᶫko ᴴpogin] (3sg pres: घो पी़क) क्रि.प. 1बिहेको पार्टी नगरी घरमा बुहारी भित्र्याउनु takeawife without havingawedding party (sem. domains: 2.6.1.1 - विवाह प्रबन्‍ध गर्नु.) 2ढोका सार्नु
थुक्‍कीन [ᴴtʰuk‍kin] क्रि. 1भेट्नु meet, come across, get, find (sem. domains: 8.3.7.7.3 - उपयुक्‍त, 2.6.1.1 - विवाह प्रबन्‍ध गर्नु, 4.2.1.4 - भेट्‌नु, 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु.) 2ठक्‍कर खानु (sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.)
नो‍का [ᶫno‍ka] (var. of GH: नोरका) ना. दाइजो bridal gift, dowry (sem. domains: 2.6.1.1 - विवाह प्रबन्‍ध गर्नु.)
याक्‍का ग्‍याप्‍कीन [ᶫjak‍ka ᶫgʲap‍kin] (var. of CN: याका ग्‍याप्‍कीन) (imp: याक्‍का ग्‍योप) क्रि.प. शुभ अवसरमा टाउकोमा घिउको टुक्रा लगाउनु, टीका टालो गर्नु engage (sem. domains: 2.6.1.1 - विवाह प्रबन्‍ध गर्नु.)
श्‍योवा पुगीन [ᶫʃowa ᴴpugin] (var. of SH: श्‍योवा पुल्‍गी) क्रि.प. बिन्ती गर्नु plea (sem. domains: 2.6.1.1 - विवाह प्रबन्‍ध गर्नु, 3.3.2 - अनुरोध.)
स्‍यायाङ [ᴴʃajaŋ] (var. of SH : स्‍याल्‍जाङ) ना. दाइजो दिँदा हुने भोज celebration while giving dowry (sem. domains: 2.6.1.1 - विवाह प्रबन्‍ध गर्नु.)